ကျောင်းသူ ​ကျောင်းသား​​များ ဖတ်​ဖို့ - Myanmar Media
ကျောင်းသူ ​ကျောင်းသား​​များ ဖတ်​ဖို့
ကျောင်းသားတွေရဲ့ အဆင့်တွေ ဘာကြောင့်ကွာခြားနေကြပါသလဲ….?
စာမေးပွဲတွေ ဘာလို့ ကျနေရသလဲ….?
ကိုယ်က ကြိုးစားနေပါလျက်နဲ့ ဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲ……?
ဒီပုစ္ဆာရဲ့ မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ အဖြေကိုအတော်များများသိချင်ကြမှာပါ။ တကယ်တော့ ကျောင်းသားတွေအဆင့်တွေကွာတာ၊ စာမေးပွဲတွေကျတာ အခြားမဟုတ်ဘူး။ သင်ယူကျင့်သုံးခြင်း မတူညီကြလို့ပါ။
လူတွေအတော်များများ ကျောင်းသားအတော်များများထင်တာက စာသင်ရင် တတ်မယ် စာဖတ်ရင် တတ်မယ်သင်တန်းတစ်ခုခုတက်ရင် တတ်မယ်လို့ ထင်ကြတာပါ။ဘယ်လောက်တော်တဲ့ ဆရာကသင်ပေးပေးကိုယ်ကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်၊ လိုက်ကျင့်မှ တတ်တာမျိးပါ။
စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာလည်း သင်တဲ့အချိန်လည်း အတူတူ၊သင်တဲ့စာလည်းအတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်တန်းတစ်ခုတက်လည်း သင်တဲ့စာလည်း အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာက စာသင်ပေးတယ် ကျောင်းသားက ကြိုးစားပြီး သင်ယူတယ်ဆရာက စာကျက်ခိုင်းတယ် ကျောင်းသားကကြိုးစားပြီး စာကျက်တယ် သင်္ချာပုစ္ဆာသင်ပေးပြီး တွက်ခိုင်းတယ်
ကျောင်းသားက ဒီသင်္ချာကို တွက်ပြီး ဖြေတယ်။
အတော်များများမသိလိုက်တာကမှတ်သားနာယူထားရမှာကို မေ့နေတက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စာကျက်တဲ့အခါ စာကိုပဲ တိုက်ရိုက်ကြီးကျက်နေတာ ကိုယ့်ဦးနှောက်က အဲဒီစာကို မှတ်သားထားရမှာကို မသိခဲ့ကြတာ အမှန်ပဲ။စာကိုပဲ တိုက်ရိုက်ကြီး ကျက်နေတော့ အဲဒီစာကို ကျက်လို့ရပြီးဆိုပေမယ် မှတ်သားမထားတော့ ကျက်ထားတဲ့စာတွေက သူအလိုလို့ မေ့သွားတက်ကြတယ်။
ဒီလို့မျိုး ကျွန်တော် ကျောင်းသားဘဝကလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲ ခေတ်လူငယ် ကျောင်းသားအတော်များများဖြစ်တတ်တာ မဆန်းတော့ပါဘူး။ပြီးတော့လည်း အသေးစိတ်အကြောင်းအရာလေ ထပ်ပြောပြချင်တယ်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ မဆိုထားနဲ့လူအများစုက သူများရဲ့ပြောစကားကို မနာခံတတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားကိုပဲ လက်ခံ နာခံတတ်တာများပါတယ်။
တစ်ဖက်လူရဲ့ပြောစကားကို ကိုယ့်ရဲ့နားနဲ့ ကြားပြီးဦးနှောက်ကဆက်စပ် ဘာသာပြန်တွေးခေါ်လိုက်တာကိုပဲသိလိုက်တာမျိုးပါ။ ရိုးရိုးကြည့်လိုက်ရင် ဆရာက သင်ပေးတာကို
ကိုယ်က သင်ယူနေတယ်ဆိုပေမယ့် သေချာစဉ်းစားပြီးတွေးကြည့်ရင်တော့ ကိုယ်ဦးနှောက်က ဆက်စပ် ဘာသာပြန်သင်ပေးတာကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည် သင်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ့်ဦးနှောက်က ဆရာပြောတာကိုလိုက်လံ မတွေးတောဘူး မဆက်စပ်ဘူး မမှတ်သားဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲသင်သင် တက်မြောက်ဖို့ခက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလို အသေးစိတ်သိလာရင် ကိုယ်စာသင်တိုင်းမှာကိုယ့်ဦးနှောက်ကို တွေးခိုင်းပါ ဆက်စပ်ခိုင်းပါ။ဒါမှ ဒီအတွေးလေးတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက် တတ်သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို့နာလည်း သဘောပေါက်တတ်သိလာရင်တော့ဒီနှစ် စာမေးပွဲကျတဲ့သူတွေ နောက်လာမယ်နှစ်ကြရင်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှတ်သားစရာ စာလေးကို ကျောင်း ဆရာ/မ တွေကကိုယ့်ရဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပြန်လည်းကာတစ်ဆင်မျှဝေကာ သင်ပေးသင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ဒီစာက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက်ကြီးထဲမဟုတ်ပါဘူး အင်းတာနက်အပေါ်မှာ စာရေးဆရာစာရေးသူတွေရဲ့ စာကိုဖတ်ရူ့အားပေးနေတဲ့ စာဖတ်သူပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။စာတွေကို အပေါ်ယံ ဖတ်မသွားပါနှင့် လေးလေးနက်နက်ဖတ်ပါ။ မှတ်သားသင်တာကို မှတ်သားပါ။
စာဖတ်သူတွေအတွက် အသိတစ်ခု ပညာပေး ရသတစ်ခု၊ သင့်အတွက်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် #ကိုစိုးနိူင်မင်း (လ.ပ.စ) ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးက အများကြီး ဝမ်းသားပါတယ်။
Credit:ကိုစိုးနိူင်မင်း(လ.ပ.စ) FB မှ
ကြောငျးသားတှရေဲ့ အဆငျ့တှေ ဘာကွောငျ့ကှာခွားနကွေပါသလဲ….?
စာမေးပှဲတှေ ဘာလို့ ကနြရေသလဲ….?
ကိုယျက ကွိုးစားနပေါလကျြနဲ့ ဘာကွောငျ့မအောငျမွငျတာလဲ……?
ဒီပုစ်ဆာရဲ့ မေးခှနျးဖွဈတဲ့ အဖွကေိုအတျောမြားမြားသိခငျြကွမှာပါ။ တကယျတော့ ကြောငျးသားတှအေဆငျ့တှကှောတာ၊ စာမေးပှဲတှကေတြာ အခွားမဟုတျဘူး။ သငျယူကငျြ့သုံးခွငျး မတူညီကွလို့ပါ။
လူတှအေတျောမြားမြား ကြောငျးသားအတျောမြားမြားထငျတာက စာသငျရငျ တတျမယျ စာဖတျရငျ တတျမယျသငျတနျးတဈခုခုတကျရငျ တတျမယျလို့ ထငျကွတာပါ။ဘယျလောကျတျောတဲ့ ဆရာကသငျပေးပေးကိုယျကိုယျတိုငျ လိုကျလုပျ၊ လိုကျကငျြ့မှ တတျတာမြိးပါ။
စာသငျခနျးတဈခုမှာလညျး သငျတဲ့အခြိနျလညျး အတူတူ၊သငျတဲ့စာလညျးအတူတူပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ သငျတနျးတဈခုတကျလညျး သငျတဲ့စာလညျး အတူတူပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆရာက စာသငျပေးတယျ ကြောငျးသားက ကွိုးစားပွီး သငျယူတယျဆရာက စာကကျြခိုငျးတယျ ကြောငျးသားကကွိုးစားပွီး စာကကျြတယျ သင်ျခြာပုစ်ဆာသငျပေးပွီး တှကျခိုငျးတယျ
ကြောငျးသားက ဒီသင်ျခြာကို တှကျပွီး ဖွတေယျ။
အတျောမြားမြားမသိလိုကျတာကမှတျသားနာယူထားရမှာကို မနေ့တေကျကွတယျ။ ကြှနျတျောတို့ စာကကျြတဲ့အခါ စာကိုပဲ တိုကျရိုကျကွီးကကျြနတော ကိုယျ့ဦးနှောကျက အဲဒီစာကို မှတျသားထားရမှာကို မသိခဲ့ကွတာ အမှနျပဲ။စာကိုပဲ တိုကျရိုကျကွီး ကကျြနတေော့ အဲဒီစာကို ကကျြလို့ရပွီးဆိုပမေယျ မှတျသားမထားတော့ ကကျြထားတဲ့စာတှကေ သူအလိုလို့ မသှေ့ားတကျကွတယျ။
ဒီလို့မြိုး ကြှနျတျော ကြောငျးသားဘဝကလညျးဖွဈခဲ့တာပဲ ခတျေလူငယျ ကြောငျးသားအတျောမြားမြားဖွဈတတျတာ မဆနျးတော့ပါဘူး။ပွီးတော့လညျး အသေးစိတျအကွောငျးအရာလေ ထပျပွောပွခငျြတယျကြောငျးသူ ကြောငျးသားတှေ မဆိုထားနဲ့လူအမြားစုက သူမြားရဲ့ပွောစကားကို မနာခံတတျပါဘူး။ကိုယျ့ရဲ့ပွောစကားကိုပဲ လကျခံ နာခံတတျတာမြားပါတယျ။
တဈဖကျလူရဲ့ပွောစကားကို ကိုယျ့ရဲ့နားနဲ့ ကွားပွီးဦးနှောကျကဆကျစပျ ဘာသာပွနျတှေးချေါလိုကျတာကိုပဲသိလိုကျတာမြိုးပါ။ ရိုးရိုးကွညျ့လိုကျရငျ ဆရာက သငျပေးတာကို
ကိုယျက သငျယူနတေယျဆိုပမေယျ့ သခြောစဉျးစားပွီးတှေးကွညျ့ရငျတော့ ကိုယျဦးနှောကျက ဆကျစပျ ဘာသာပွနျသငျပေးတာကို ကြှနျတျောတို့ ပွနျလညျ သငျယူနခွေငျးဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ ကိုယျ့ဦးနှောကျက ဆရာပွောတာကိုလိုကျလံ မတှေးတောဘူး မဆကျစပျဘူး မမှတျသားဘူးဆိုရငျဘယျလောကျပဲသငျသငျ တကျမွောကျဖို့ခကျခဲ့ပါတယျ။ဒီလို အသေးစိတျသိလာရငျ ကိုယျစာသငျတိုငျးမှာကိုယျ့ဦးနှောကျကို တှေးခိုငျးပါ ဆကျစပျခိုငျးပါ။ဒါမှ ဒီအတှေးလေးတှေ တဈခုနဲ့တဈခု ခြိတျဆကျပွီးနားလညျသဘောပေါကျ တတျသိလာမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီလို့နာလညျး သဘောပေါကျတတျသိလာရငျတော့ဒီနှဈ စာမေးပှဲကတြဲ့သူတှေ နောကျလာမယျနှဈကွရငျစာမေးပှဲကို အောငျမွငျစှာ ဖွဆေိုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ဒီမှတျသားစရာ စာလေးကို ကြောငျး ဆရာ/မ တှကေကိုယျ့ရဲ့ ကြောငျးသားတှကေို ပွနျလညျးကာတဈဆငျမြှဝကော သငျပေးသငျပါတယျ။
မှတျခကျြ။ ။ဒီစာက ကြောငျးသူ ကြောငျးသားမြားအတှကျကွီးထဲမဟုတျပါဘူး အငျးတာနကျအပျေါမှာ စာရေးဆရာစာရေးသူတှရေဲ့ စာကိုဖတျရူ့အားပေးနတေဲ့ စာဖတျသူပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ဖွဈပါတယျ။စာတှကေို အပျေါယံ ဖတျမသှားပါနှငျ့ လေးလေးနကျနကျဖတျပါ။ မှတျသားသငျတာကို မှတျသားပါ။
စာဖတျသူတှအေတှကျ အသိတဈခု ပညာပေး ရသတဈခု၊ သငျ့အတှကျအကြိုးရှိစတေယျဆိုရငျ #ကိုစိုးနိူငျမငျး (လ.ပ.စ) ဖွဈတဲ့ကြှနျတျောမြိုးက အမြားကွီး ဝမျးသားပါတယျ။
Credit:ကိုစိုးနိူငျမငျး(လ.ပ.စ) FB မှ